आजको लागि तपाइको दिन कस्तो रहला ? - Muldhar Post
दैनिक राशिफल २०७७, १९ चैत्र बिहीबार 110 पटक हेरिएको
आज मिति २०७७ साल चैत्र महिनाको १९ गते बिहिवार रहेको छ ऽ। मेष-आनन्दले भरिएको राम्रो दिन। त्यसै बसिरहनु भन्दा पैसा कमिने केहीमा किन संलग्न हुनुहुँदैन – यसले तपाईंको कमाउने शक्तिमा सुधार हुनेछ। आफ्ना छोराछोरीलाई तपाईंको उदार व्यवहारको फाइदा लिन नदिनुहोस्। आज तपाईंको आत्मीय भएर जोडिने अनुरोध गर्ने कसैसँग भेट हुने बलियो सम्भावना छ। खुशीसँग व्यापार नमिसाउनुहोस्। एउटा सानो प्रयासले, आजको दिन तपाईंको वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन बन्न सक्छ।
वृष-तपाईंसँग प्रशस्त ऊर्जा हुनेछ – तर कामको दबावले तपाईंलाई रिस उठ्नेछ। आज सल्लाह दिनुभयो भने – त्यसपछि सल्लाह लिन पनि तयार हुनुहोस्। तपाईंको सधैंभरिको प्रेम आफ्नो प्रियको लागि एउटा नदी हो। “केही कुरा हुन्छ भनेर नपर्खिनुहोस् – बाहिर निस्केर नयाँ अवसर खोज्नुहोस्।” यात्राले तपाईंलाई नयाँ ठाउँहरू देख्न र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू भेट्न सघाउँछ। के तपाईंलाई वैवाहिक जीवन समझौता मात्रै हो भन्ने लाग्छ? यदि हो भने, तपाईंलाई आज थाहा लाग्नेछ कि यस्तो राम्रो कुरा कहिल्यै तपाईंको जीवनमा भएको थिएन।
मिथुन-तपाईंले आराम गर्न सक्ने दिन हो। तपाईंका मांसपेशीलाई राहत दिन तेलले आफ्नो शरीरको मालिश गर्नुहोस्। तनाउको समय हुन सक्छ तर परिवारको समर्थनले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ। समस्या घरमै उत्पन्न हुन सक्छन् – तर साना कुराहरूको लागि आफ्ना जोडीको आलोचना गर्नबाट जोगिनुहोस्। तपाईं मेहनत र धैर्य मार्फत आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नुहुनेछ। आफ्नो जोडीले दिएको तनाउले गर्दा तपाईंको स्वास्थ्य नराम्रो हुन सक्छ।
कर्कट-तपाईंको आशा धेरै सुगन्धित र अचम्मलाग्दा फूल जस्तै फुल्नेछ। तपाईंले जानेका मानिसहरूको माध्यमबाट आयका नयाँ स्रोतहरू उत्पन्न हुनेछन्। छोरीको रोगले तपाईंको मुड बिगार्ने छ। उनलाई रोगबाट मुक्ति दिलाउन आफ्नो प्रेम दिनुहोस्, जसले उनको हौसला बढाउनेछ। प्रेमको शक्तिमा निको पार्ने ठूलो शक्ति लुकेको हुन्छ। कसैले पनि तपाईंको प्रेम अलग गर्न सक्ने छैन। तपाईंको मालिक बहाना मन पराउँदैन – उसको रेकर्डमा सही रहन आफ्नो काम गर्नुहोस्। तपाईंका आज आमाबाबुले कुनै साँच्चै नै आश्चर्यजनक कुराले तपाईंको जोडीलाई आशीर्वाद दिन सक्छन जसले अन्ततः तपाईंको वैवाहिक जीवनमा विकास ल्याउनेछ।
शिंह-आफ्नो दीर्घ रोग निको पार्न मुस्कान चिकित्साको प्रयोग गर्नुहोस् किनकि यो सबै समस्याको लागि उत्तम विषनाशक औषघि हो। आज सामाजिक कार्यहरुमा उपस्थित हुने मौका पाउन सक्नुहुन्छ- जसले गर्दा तपाईं प्रभावशाली मान्छेको सम्पर्कमा आउन सक्नुहुनेछ। आज, तपाईंलाई आफ्नो प्रेमीले तपाईंलाई सधैं प्रेम गर्नेछ भन्ने थाहा लाग्नेछ। तपाईंले प्रत्येक कदममा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्नुभयो भने – सफलता निश्चित तपाईंको हो। आज आफ्नो जोडीले तपाईंलाई साँच्चै विशेष केही किनिदिन सक्छन्।
कन्या-तपाईंको धैर्यलाई लगातार प्रयासको साधारण अर्थमा र समझसँग राख्नुहोस् जसले तपाईंको सफलताको ग्यारेन्टी रहनेछ। तपाईंको राम्रो व्यवहारले परिवारलाई जीवन ज्योति दिन्छ। यस्तो निष्कपट मुस्कानसँगका व्यक्तिलाई केही मानिसहरूले मात्र प्रतिरोध गर्न सक्छन्। अरूसँग राम्रो व्यवहार गर्न सक्ने तपाईं एउटा सुगन्धित फूल जस्तै हुनुहुन्छ। रोमान्टिक चालले फाइदा हुनेछैन। महत्वपूर्ण मान्छेसँग अन्तरक्रिया गर्नाले तपाईंलाई राम्रो विचार र योजना ल्याउनेछ। तपाईंको चुम्बकीय व्यक्तित्वले तपाईंलाई उज्यालोमा राख्नेछ। आज तपाईंका कुनै पनि योजना बनाउनु अघि आफ्नो जोडीलाई सोध्नुभएन भने, तपाईंलाई प्रतिकूल प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सक्छ।
तुला-तपाईंको ऊर्जा स्तर उच्च हुनेछ र रोकिएका कार्यहरू पूरा गर्न यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईं यसको लागि बाहिर जानु पर्ने भए तापनि – छोराछोरीसँग आनन्द मनाउन आफ्नो खाली समय खर्च गर्नुपर्छ। आज आफ्नो प्रेमीलाई निराश नबनाउनुहोस् किनकि पछि पछुताउनु पर्न सक्छ। तपाईंको हावी मनोवृत्तिले आफ्ना सहकर्मीबाट आलोचना हुनेछ। आज तपाईंको जोडीले तपाईंको आवश्यकतालाई सन्तुष्ट गर्न अस्वीकार गर्न सक्छ, जसले गर्दा अन्ततः तपाईंलाई निराशा हुन सक्छ।
वृश्चिक-स्वस्थ रहनको लागि आहार नियन्त्रणमा राख्नुहोस् र नियमित व्यायाम गर्नुहोस्। सम्पत्ति सम्झौता कारोबार हुनेछ र त्यसबाट शानदार लाभ हुनेछ। बच्चाहरुले तपाईंलाई घरेलू काम पूरा गर्न मद्दत गर्नेछन्। तपाईंकी प्रियतमाका कठोर शब्दहरूले तपाईंको मुड व्यग्र हुन सक्छ। नयाँ परियोजनाहरू र योजना लागू गर्न राम्रो दिन। आफ्नो जोडीको मागले तपाईंलाई केही तनाउ दिन सक्छ।
धनु-आफ्नी पत्नीसँग पारिवारिक समस्या साझेदारी गर्नुहोस्। मायालु र एकअर्काको पोषण गर्ने दम्पतीको रूपमा आफूलाई पुन स्थापित गर्न र पुन: पत्ता लगाउन एकअर्काप्रति केही समय बिताउनुहोस्। तपाईंका छोराछोरीले पनि घरमा सुख र शान्ति सद्भावको तरङ्ग महसुस गर्न सकुन्। यसले तपाईंहरू दुवैलाई आफ्नो बातचीत ऐच्छिक रूपमा र स्वतन्त्रतासँग गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। नातिनातिनाहरू खुशी गराउने राम्रा स्रोत हुनेछन्। आफ्नो विश्वासले तपाईंको व्यावसायिक जीवनलाई सुदृढ बनाउनेछ। यसले अरूलाई आफ्नो मत राखेर विश्वस्त गर्न र उनको सहायता लिन सक्षम गराउनेछ। आफ्नो साथीमा शङ्का गरेकोले ठूलो लडाई हुन सक्छ।
मकर-तपाईंले आज गरेका केही शारीरिक परिवर्तनहरूले तपाईको ढाँचामा पक्कै बृद्धि हुनेछ। तपाईंको जोडी मद्दतगार र सहयोगी हुनेछ। तपाईं आफ्नो प्रेमीले गरेको कुराले अत्यधिक संवेदनशील हुनुहुनेछ – तपाईंले आफ्नो भावना नियन्त्रण गरेर स्थिति अझै बिगार्न सक्ने केही गर्नबाट जोगिन आवश्यक छ। आज तपाईं उपस्थित भएका व्याख्यान र सेमिनारले विकासको लागि नयाँ विचार ल्याउनेछन्। कुनै आफन्त, मित्र वा छिमेकीले आज तपाईंको वैवाहिक जीवनमा खिचलो ल्याउन सक्छ।
कुंभ-तनाउबाट छुटकारा प्राप्त गर्न आफ्ना बच्चाहरुसँग आफ्नो बहुमूल्य समय बिताउनुहोस्। तपाईंले बच्चाको निको पार्ने शक्तिको अनुभव गर्नुहुनेछ। तिनीहरू पृथ्वीमा सबैभन्दा शक्तिशाली आध्यात्मिक र भावनात्मक व्यक्तित्व हुन्। तपाईंले आफैलाई पुन यौवन भएको महसुस गर्नु हुनेछ। वृद्ध व्यक्तिको स्वास्थ्यले केही चिन्ता गराउँछ। आज तपाईंको प्रेम साझेदारले तपाईंलाई केही साँच्चै सुन्दर वस्तु दिनेछ। आज तपाईं रोशनीमा हुनुहुनेछ – र सफलता तपाईंको सामर्थ्य भित्रै छ। आजभोली तपाईं र तपाईंको जोडी धेरै खुसी हुनु हुँदैन भने, तपाईं आज पागल रमाइलो गर्न जानु हुँदैछ।
मीन-भाग्यमा निर्भर नहुनुहोस, आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोस् किनकि भाग्यवान् अल्छी देवी हो। साथीहरू, व्यापार सहयोगिहरु र आफन्तहरूसँग आफ्नो चासोको रक्षा गर्नुहोस – किनकि तिनीहरू तपाईंको आवश्यकता अनुसारको नहुन सक्छन्। तपाईंकी प्रेमीकाको नराम्रो व्यवहारले आज रोमान्समा बाधा पर्नेछ। तपाईंको जोडीले तपाईं कुनै मुड नभएको बेला वा भएको बेला बाहिर जानको लागि हुत्याउनाले तपाईंलाई रिस उठ्नेछ।